बाघ भालु भएको जंगलमा चार सय भेडाबाख्राको गोठ, भोटे कुकुर हेरालु ! - नेपालबहस
बाघ भालु भएको जंगलमा चार सय भेडाबाख्राको गोठ, भोटे कुकुर हेरालु !
| ९:२२:२७ मा प्रकाशित
३० कार्तिक, म्याग्दी । वरिपरि जङ्गलले घेरिएको बीचमा गोठ छ । गोठको छेवैमा भेडाबाख्राको हुल छ । जङ्गलको छेउको चौरमा रहेको भेडीगोठको हेरालुको जिम्मा पाँच वटा कुकुरलाई दिइएको छ । यो म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङको पुतलीडाँडा नजिकको भेडीगोठको दृश्य हो । बस्तीदेखि एक दिनको यात्रापछि पुगिने यहाँको भेडीगोठको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गोठमा रहेका पाँच वटा भोटे जातका कुकुरको रहेको भेडापालक कृषक हिमबहादुर छन्त्यालले बताए ।
करिब ४०० भेडाबाख्रा रहेको छन्त्यालको गोठमा दुई जना हेरालु छन् तर उनीहरुको जिम्मेवारी भेडाबाख्रालाई चरण क्षेत्रमा लगाउने र गोठको सामान ओसार पोसार गर्ने मात्रै हो । गोठमा रहेका भेडाबाख्रालाई जङ्गली जनावरबाट बचाउने र गोठका हेरालुहरुको समेत सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी गोठमा रहेका कुकुरहरुकै रहेको भेडापालक कृषक छन्त्याल बताउँछन ।
गोठमा रु १५ देखि ६० हजारसम्ममा छन्त्यालले कुकुर खरिद गरी गोठमा पालेका छन् । चरणक्षेत्रदेखि रातमा सिङ्गो गोठको सुरक्षाका लागि कुकुर नै पहिलो रक्षकको रूपमा रहेको छन्त्याललको अनुभव छ । गत वर्ष रोगका कारण गोठमा कुकुर मरेपछि आफ्नो गोठमा १५ दिनको अवधिमा बाघ र चितुवाले १५ वटा र स्यालले ५ वटा भेडाबाख्रा मारेको छन्त्यालले जानकारी दिए ।
“कुकुर भएको समयमा अहिलेसम्म गोठमै बाघ र चितुवा आउन सकेका छैनन्, कहिलेकाहीँ कुकुरको आँखा छलेर चरणक्षेत्रमा भने आक्रमण हुने गरेको छ, भेडीगोठको रक्षक भनेकै कुकुर हो”, उनले भने ।
भेडीगोठमा रहेका भेडाबाख्रासँगै कुकुरहरु समेत चरणक्षेत्रमा जाने गर्छन् । बेँसीदेखि हिमालको फेदीसम्म घना जङ्गलका बीचमा गोठ राख्दै आएका मल्कबाङका अर्का भेडापालक कृषक कमरा विकले कुकुरहरु आफ्नो सुरक्षाको सिपाही र गोठको सारथी भएको बताए ।
जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बचाउन कुकुरको घाँटीमा काँडेमाला लगाइदिने चलन रहेको छ । दिनको समयमा चरण क्षेत्रमा जाने कुकुरहरु रातको समयमा भेडाबाख्रा बसेको चौरको वरपर बसेर भेडाबाख्रा र गोठको पहरेदारको काम गर्ने विकको भनाइ छ । “यहाँ मेरो साथी भनेकै कुकुर हो, रात होस् या दिन, मेरो र गोठमा रहेका भेडाबाख्रालाई जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बचाउने जिम्मा उसैको हो”, विकले भने ।
कतैबाट बाहिरी नचिनेको मानिस र जङ्गली जनावर गोठ र भेडाबाख्रातर्फ अघि बढेमा ठूलो स्वरले भुक्ने कुकुरको काम हो । कुकुर जनावर भए पनि हिमाली भेगमा रहेका भेडाबाख्रा, गाईभैसीँका गोठहरुमा भने कुकुरको भूमिका जनावरको नभई एक प्रतिबद्ध रक्षकको रूपमा देखिन्छ ।
एकान्त, बस्तीदेखि धेरै टाढा र घना जङ्गलमा बस्ने सबैजसो गोठालाहरुले साथी र प्रतिबद्ध रक्षकको रूपमा कुकुर पालन गर्ने गरेको पाइएको मल्कबाङका युवा अमर छन्त्यालले बताए।
पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा सोखका लागि कुकुर पाल्ने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा दुर्गम र ग्रामीण बस्तीका भेडाबाख्रा र गाईभैँसी पालन गर्ने कृषकहरु भने कुकुरलाई आफ्नो अङ्गरक्षककै रूपमा पालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
हिन्दूहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्वअन्तर्गत शनिवार कुकुरको पूजा गरी कुकुर तिहार मनाइयो । हिन्दू मान्यताअनुसार कात्तिक कृष्ण चर्तुदशीका दिन भैरवको वाहनको रूपमा कुकुरलाई पूजा गरिन्छ । कुकुर मानिसको नजिकको साथीको रूपमा चिनिन्छ भने आज्ञाकारी र कर्तव्यपालक जनावरको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।
दाङमा माहुरीपालक कृषकको सङ्ख्यामा वृद्धि ३ दिन पहिले
प्रचण्डका घरबेटीबाट ५ करोडको धरौटी जफत ६ दिन पहिले
कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा राख्दै २५ योजना छनोट २ हप्ता पहिले
जङ्गली जनावरका कारण खाद्यबाली उत्पादनमा कमी २ हप्ता पहिले
बोरा नहुँद्या धान खरिदमा ढिलाई २ हप्ता पहिले
चापाकोटमा सामूहिक केराखेती शुरु २ हप्ता पहिले
डीआईजी पोखरेललाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस २० मिनेट पहिले
सप्तरीको कडरबोना, कञ्चनपु र लोहजरामा अस्पताल भवन शिलान्यास ३ घण्टा पहिले
डीएसपीबाट पीडित व्यवसायी झा अझै पाएनन् न्याय ३ घण्टा पहिले
सडक छ, पुल छैन ३ घण्टा पहिले
आगामी पुस १ गतेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गरिने ४ घण्टा पहिले
महासंघको कोषाध्यक्षमा सकुन्तलाल हिराचन निर्वाचित ६ घण्टा पहिले
अस्पताल सरकारको भन्दा पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि महत्वपूर्ण ४ घण्टा पहिले
नेपाल र चीनबीच फेरि सैन्य तालिम फेरि सुरु हुने १३ घण्टा पहिले
माेदीलाई ओलीको सन्देश : ‘सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गरौँ’ ४ दिन पहिले
वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेसन्स अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित १० घण्टा पहिले
अब सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले ७.५ प्रतिशत प्रतिफल पाउने ३ दिन पहिले
प्रचण्डलाई ‘हेग’ ओलीको तुष मात्र ! ३ दिन पहिले
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : सडक र कृषिलाई प्राथमिकता ६ दिन पहिले
प्रहरीमा उजुरी दिन गएकी दीपक मनाङेकी श्रीमति पक्राउ ५ दिन पहिले
काठमाडौं आउँदै गरेको कैलाश एयरको हेलिकोप्टरमा गिद्ध ठोक्कियो १ दिन पहिले
वाग्मतीमा पनि गहुँको बीउ अभाव, किसान समस्यामा ४ दिन पहिले
विद्यालयमा दिइने सजायको स्वरूप बदलियो २ दिन पहिले
नेसन्स लिग जितेको पोर्चुगल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो २ हप्ता पहिले
सडक कालोपत्र गरिँदै ३ हप्ता पहिले
अब नलगाडका कृषकको हातमा आधुनिक उपकरण ४ हप्ता पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा १३८० नयाँ संक्रमित थपिए २ दिन पहिले
कन्या जातको च्याउको बीउ ३ हप्ता पहिले
वीर अस्पतालका १६ चिकित्सकले किन दिए सामूहिक राजीनामा ? ४ हप्ता पहिले
भरतपुरमा दुई जना संक्रमितको मृत्यु ३ दिन पहिले
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाविरुद्ध उजुरी २ हप्ता पहिले
सात वर्षपछि अमिताभ र अजय देवगन पुनः एकसाथ ३ हप्ता पहिले
अछाममा छाउगोठमा युवतीको मृत्यु ! १२ महिना पहिले
जङ्गली हात्ती लखेट्न जाँदा युवकको मृत्यु ६ महिना पहिले